အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens အား ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး – Ministry of Foreign Affairs
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens အား ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Wouter Robert Marie Jurgens အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ဗီဒီယိုကွန့်ဖရင့်ဖြင့် လက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နယ်သာလန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့၌ နယ်သာလန်သံရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုးတက်မှုရရှိခဲ့သည့် အခြေအနေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအခြေအနေ ပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာ‌ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ကိစ္စဖြင့် လာရောက်သူများအား လာရောက်ခွင့်ပြုရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော နယ်သာလန်နိုင်ငံသားများနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နိုင်ရေးကိစ္စ၊ အစိုးရအနေဖြင့် COVID-19 ကြောင့် လူမှု-စီးပွား ထိခိုက်နစ်နာမှုများအား ကုစားရန်အတွက် စီးပွားရေးထိခိုက်မှု သက်သာရေးစီမံချက် (CERP) အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်များက ပူးပေါင်းကူညီပံ့ပိုးရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသို့ နိုင်ငံတကာမှ လေ့လာရေးအဖွဲ့များ လာရောက်နိုင်မည့် အခြေအနေတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာ-နယ်သာလန် နှစ်နိုင်ငံအကြား စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေသယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍတို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးကိစ္စများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အပြုသဘော ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရေးအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်အရှိန်အဟုန် မြှင့်တင်သွားရေးကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ စိုးရိမ်မှုရှိသည့် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် မြှင့်တင်ရေးကိစ္စ၊ လူ့အခွင့်အ‌ရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတို့နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ သဘောထားအမြင်များကို အသိပေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။